Soomaaliya iyo Itoobiya oo galay heshiisyo cusub. (Maqaal xiiso leh) | Hadalsame Media
Home Wararka Soomaaliya iyo Itoobiya oo galay heshiisyo cusub. (Maqaal xiiso leh)
Soomaaliya iyo Itoobiya oo galay heshiisyo cusub. (Maqaal xiiso leh)
(Muqdisho) 16 Juun 2018 – Madaxwayneha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo xaafiiskiisa Muqdisho maanta ku qaabiley Ra’iisal Wasaaraha cusub ee Itoobiya Abiy Ahmed ayaa labada Masuul waxay wada qabteen shir Jaraa’id oo ay kaga hadleen waxyaabaha ugu muhiimsan oo ay xooga saareen.
Waxyaabaha xiisaha leh oo ay ka wadahadleen waxaa ka mid ah in labada dal ay ka midoobaan la dagaalanka argagixisada, Faqriga iyo shaqa la’aanta geeska Afrika.
Itoobiya oo iyadu hadda u muuqata inay gashay isbedel siyaasadeed oo cusub ayaa Ra’iisal Wasaare Abiy Ahmed waxa uu Muqdisho ka sheegay in dowladdiisa ay aad u dooneyso in Soomaaliya iyo Itoobiya yeeshaan markii ugu horeysay suuq ganacsi oo xor ah iyo in xaduudaha dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya noqdaan kuwa looga faa’iideysto hormarinta labada dal iyo shucuubtooda.
Mr. Abiy Ahmed oo booqashooyin rasmi ah ku tagay dhawaan dalalka Kenya, Jabuuti iyo Imaaraadka carabta ayaa loo arkaa inuu yahay nin quyar socod ah. Waxaa uu ka soo jeedaa qowmidda Oramiya oo ah tan ugu badan dalka Itoobiya.
Dadka ka faa’looda arrimaha Siyaasadda iyo Ganacsiga ayaa aaminsan in haddii Itoobiya ka dhabeyso qorshayaasheeda cusub ay taasi dhabaha u xaari karto xasilooni Siyaasadeed iyo mid ganacsi oo ka hirgasha gobolka gaar ahaan Soomaaliya iyo Itoobiya.
Itoobiya waxaa Soomaaliya ka jooga kumanaan ciidamo ah kuwaas oo qaar kood qeyb ka yihiin hawgalka ciidamada Midawga Afrika ee AMISOM.
Taariikhda Itoobiya iyo Soomaaliya oo ah laba dal oo deris ah ayaa waxaa ku hareersan waayo colaadeed oo duug ah, waxaana la leeyahay ma sahlana in shacabka labada dal si dhaw isku fahmaan waqtiga dhaw.
Laakin Madaxwayneha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka sheegay shirkii Jaraa’id ee maanta in dowladdiisa ay ka go’aan tahay in la sii hagaajiyo xariirka kala dhaxeeya dalalka deris oo hadda u muuqda mid soo haggaagaya.
Madaxwayne Farmaajo iyo Ra’iisal Wasaare Abiy Ahmed waxaa ay si wadajir ah u sheegeen in shacabka labada dal yihiin dad isku dhiig ah islamarkaana wadaaga waxyaabo badan oo la xariira dhaqanka iyo ganacsiga. Waxaa kaloo ay sheegeen inay abuuri doonaan jawi ku dhisan is-aaminaad iyo wax wada qabsi mustaqbalka fog.
Waxyaabaha sida hoose looga hadlay waxaa ka mid ah wadasheyn la xariirta ganacsiga warshadaha, suuq xor ah oo ganacsi, Kaabayaasha dhaqaalaha sida Airport-yadda, Jidadka dekaddaha, Webbiyada, ka faa’iideysiga Badda Cas iyo Indian Ocean iyo wixii la mi ah.
Itoobiya ma lahan bad laakin waxaa ay xariir ganacsi oo wagaansan la leedahay dalka Kenya, Jabuuti iyo kuwa ka baxsan gobolka waxana hadda ay dooneysaa inay sii xoojiso xariirka ay la leedahay Soomaaliya si ay kaga macaashto dekaddaha Soomaaliya oo ay u aragto inay muhiim u noqon karaa ganacsigeeda dibedda iyo gudaha.
Inkastoo labada dal lee yihiin xariir soo jireen ah ayaa misna dowladda Itoobiya lagu xantaa ineysan raali ka ahayn in Soomaaliya yeelato ciidamo xoog leh oo milatari ah, waxaase maanta R’iisal Wasaareha cusub ee Itoobiya ka sheegay Muqdisho inay doonayaan inay arkaan Soomaaliya oo isku filan islamarkaana ka maarantay ciidamo shisheeye.
Dhawaqaasi waxaa uu u noqon karaa Soomaaliya inay gashay waji cusub sida uu sheegay Mr. Abiy Ahmed. Waxaa uu sheegay oo kale inay doonayaan inay Soomaaliya iska kaashadaan joogteynta iyo adkeynta ammaanka gobolka guud ahaan.
Isagoo mararka qaar kood adeegsanayey Af-Soomaali jajab ah ayuu Mr. Abiy Ahmed ka dhawaajiyey in Itoobiya la imaan doonto waji cusub oo siyaasadeed oo ay kula dhaqmi doonto saaxiibadda gobolka oo ay Soomaaliya ka mid tahay.
Waxaa uu yiri, “Itoobiya bog cusub ayaa u furmay” waxa uuna si aad ah kaga madceliyey soo dhaweynta diiran ee loogu sameeyey Magaaladda Muqdisho isagoona tahniyad u diray shacabka Soomaaliyeed Munaasabadda ciida awgeed.
Booqashadiisa ayaa qaatey saacaddo kooban maanta oo sabti ah waxaana aad loo adkeeyey ammaanka caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho iyadoo ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan kuwa Soomaaliya la dhigay gudaha iyo banaanka Magaaladda.
Previous articleGOOGOOSKA: Argentina vs Iceland 1-1 (Messi oo laga jejebiyay)
Next articleGOOGOOSKA: Croatia vs Nigeria 2-0 (Nigeria oo laba la laqsiiyay)